Xubuntu 18.04 LTS Fametrahana torolàlana | Avy amin'ny Linux
Xubuntu 18.04 LTS Fametrahana torolàlana
Darkcrizt | | Tutorials / Manuals / Tips
Ya tamin'ny famoahana ny Ubuntu 18.04 LTS, ny tsirony hafa dia nanao hetsika mitovy ihany koa handefasana kinova miorina amin'ireo. Raha izany dia Tonga hizara aminao ity torolàlana kely fametrahana ity aho an'ny Xubuntu 18.04 LTS.
Xubuntu dia nampiavaka an'i ho lasa tsiron'ny Ubuntu tsy mitaky enti-manana rafitra firy, noho izany dia sokajina ho fizarana maivana izy, ho fanampin'izay dia mbola mitazona ny fanohanan'ny rafitra 32-bit ity fizarana ity tsy toa an'i Ubuntu.
Alohan'ny hisintomana dia ilaina ny mahafantatra ireo fepetra takiana amin'ny ekipanay fa afaka mihazakazaka Xubuntu 18.04 LTS.
1 Fepetra takiana amin'ny fampandehanana Xubuntu 18.04 LTS
2 Ahoana ny fametrahana Xubuntu 18.04 LTS
3 Dingana fametrahana Xubuntu 18.04 LTS
Fepetra takiana amin'ny fampandehanana Xubuntu 18.04 LTS
Mba hampandehanana ny rafitra sy hampiasa ny zavatra ilaina amin'izany mila farafaharatsiny ao amin'ny ekipanay izahay:
Processor miaraka amin'ny fanohanan'ny PAE
8 GB amin'ny habaka kapila maimaimpoana
Karatra sary 800 × 600 famaranana farafaharatsiny
DVD drive na port USB
Fepetra takiana ny manana traikefa tsy misy fetra ao amin'ny rafitra dia:
1 RAM no mandroso
20 GB amin'ny habaka kapila maimaimpoana
Karatra sary manohana farafaharatsiny 1024 × 1280
Ahoana ny fametrahana Xubuntu 18.04 LTS
Hanohy hisintona avy amin'ny tranokala ofisialy iso ny rafitra, Manoro hevitra ny fisintomana aho amin'ny alàlan'ny rohy Torrent na Magnet.
Raha vantany vao vita ny fampidinana dia azonao atao ny mandoro ny iso amin'ny DVD na USB sasany. Ny fomba hanaovana azy amin'ny DVD:
Windows: Azontsika atao ny manoratra ny iso amin'ny Imgburn, UltraISO, Nero na programa hafa na dia tsy misy azy ireo ao amin'ny Windows aza izany ary avy eo dia manome antsika safidy hanindry tsara ny ISO.
Linux: Azon'izy ireo ampiasaina indrindra ilay miaraka amin'ny tontolo misy sary, anisan'izany ny, Brasero, k3b, ary Xfburn.
Windows: Afaka mampiasa izy ireo Fametrahana USB Universal na Linux Live USB Creator, samy mora ampiasaina avokoa.
Linux: Ny safidinao dia ny fampiasana ny baikon'ny dd, zava-dehibe ny hijerenao hoe aiza no misy ny USB nitaingina USB handraisana an-tsoratra ny angona momba azy:
dd bs=4M if=/ruta/a/Xubuntu-18.04-LTS.iso of=/dev/sdx && sync
Dingana fametrahana Xubuntu 18.04 LTS
Rehefa avy nanomana ny fitaovana fampidirantsika izahay dia manohy mampiditra azy amin'ny fitaovana hampiasantsika azy.
Vantany vao vita izany, amin'ny efijery voalohany dia hifidy ny hametraka Xubuntu isika ary avelao izy hameno ny zavatra rehetra ilaina amin'ny rafitra.
Raha vantany vao ampidirina amin'ny solosaina ny rafitra dia hiseho ny mpamosavy Xubuntu, amin'ny efijery voalohany amin'ity dia hangataka antsika izy andao hisafidy ny fiteny hametrahana azy ny rafitra Xubuntu 18.04 LTS vaovao.
Amin'ity ohatra ity dia misafidy Espaniôla aho ary tsindrio ny manohy.
Vita izao dia fantatro Hangataka antsika hametraka rindrambaiko an'ny antoko fahatelo izy io ary koa hametraka fanavaozana Xubuntu raha mbola eo am-pandrosoana ny fizotry ny fametrahana.
Mba hahafahantsika misafidy an'io dia ilaina ny mifandray amin'ny Internet, raha vantany vao nifidy ny tiana isika dia tsindrio manaraka
Amin'ireto safidy manaraka ireto, Izy io dia hampiseho amintsika ny karazana fametrahana sy fizarazaran'ireo kapila.
Aiza amin'ny ankapobeny na hamafana ny kapila manontolo isika ary hametraka Xubuntu ao aminy (mitandrema tsara amin'ity safidy ity, mety hiteraka fatiantoka data tanteraka)
Na amin'ny safidy bebe kokoa, afaka hametraka kapila hametrahana Xubuntu isika na afaka mamorona na manome fizarazarana natokana ho an'ny rafitra izay tsy maintsy hanomezantsika azy ny endrika sahaza azy, amin'izay sisa tavela.
Soraty ny fizarazarana "ext4" sy ny fipetrahana ho faka "/".
Ya mahafantatra ny fanovana ataontsika, ekenay ary hahazo takelaka fanamarihana ny fanovana hatao amin'ny kapila isika raha afa-po sy manaiky hanaiky.
Raha tsy izany dia amporisihiko ianao handinika ny fizaranao ary hamantatra ireo izay anananao fampahalalana manan-danja ary aza mikasika izany.
Amin'izany no hanombohana ny fametrahana ny rafitra, amin'ny safidy manaraka dia hangataka antsika hisafidy ny faritry ny fotoantsika izy hampiorina azy amin'ny rafitra.
Mba hamaranana dia tsy maintsy mamorona isika kaonty mpampiasa anao manokana miaraka amin'ny teny miafina, Ity tenimiafiko ity dia zava-dehibe mba hahatsiarovantsika azy satria io no hidirantsika sy hiasa ao amin'ilay rafitra.
Amin'ny faran'ny fametrahana dia tsy maintsy hamerina fotsiny ny solosaina isika ary hanaisotra ny haino aman-jery sy ny fametrahana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Xubuntu 18.04 LTS Fametrahana torolàlana
4 hevitra, avelao ny anao
Raul Plazas G. dia hoy izy:
hace 3 taona
Salama. Manana Ubuntu 17 aho ary tsy hamela ahy hivoatra ho 18, matahotra aho noho ny tsy fahampian'ny fahaizan'ny milina. Omeko fanavaozana fotsiny izy io, ary rehefa mivoaka ilay safidy hanavao ny ubuntu dia tsy mamaly fotsiny izany. Raha mamaky amin'ny Internet, dia toa manohana milina maotina kokoa ny xubuntu, ary angamba vahaolana izany. Na izany aza, tsy azoko tsara hoe ahoana no hametrahana xubuntu, fa tsy ubuntu .. Ahoana no hahitako ny fiara iza no nitaingina USB?
Valiny tamin'i Raul Plazas G
Katy dia hoy izy:
hace 2 taona
Salama, te hahafantatra aho raha afaka mamerina ilay solonanarana sy tenimiafin'ny PC taloha (2006), izay notehirizina tsy nampiasaina ary te-hamerina ireo rakitra natahiry aho, nandritra ny fotoana ela no nanadinoako ny solonanarana sy ny teny miafiko, tsy afaka mamoha PC aho.
misy fomba hamahana izany ve?
Mamaly an'i katy
Allan dia hoy izy:
Azonao atao ny mametaka ny kapila mafy amin'ny linux PC hafa ary mandika ny zava-drehetra ao anaty kapila anatiny (raha tsy voahidy)
Valiny tamin'i Allan
Willi dia hoy izy:
Miasa tsy tapaka izy io. Misy zavatra mbola tsy fantatro, saingy miasa ny birao ary amin'ny simia dia lazainay fa raha mandeha ny zavatra iray dia mandeha tsara.
Valiny tamin'i Willi
Didy fototra sasantsasany tokony hianarin'ny Newbie rehetra
Solony amin'ny browser Firefox ao amin'ny Ubuntu 18.04 LTS